Ahoana no ahafahanao mamokatra ny vokatrao amin'ny TOP an'i Amazon?
Efa mba manontany tena ve ianao hoe inona ireo antony fototra telo manjo ny Amazonanao? Misy ny lanjany, ny tombam-bidy, ary ny fahefana. Ity lahatsoratra ity dia natokana amin'ny fomba hanatsarana ireo fotodrafitr'asa fototra. Hiresaka momba ny fampitomboana ny maha-zava-dehibe ny pejy momba ny vokatra, ahoana ny fananganana ny taham-pivoaran'ny vokatra Amazon sy ny fomba hanatsarana ny fahefanao marika.
Fomba hahafantarana ny vokatra an-tsoratra TOP amin'ny Amazon
Mitombo ny maha-zava-dehibe ny pejy pejy
Amazon dia mikarakara ny traikefa amin'ny mpikaroka dia manandrana manome azy ireo izay manan-danja indrindra amin'ny valin'ny fikarohana ataony. Izy io dia iray amin'ireo singa tena manan-danja izay misy fiantraikany amin'ny lisitry ny lisitry ny Amazon SERP. Izany no antony tokony handraisanao ny fiheveranao ny lisitry ny fanatsarana ny lisitra, raha jerena ireto lafiny manaraka ireto:
Ny lohateny no zavatra voalohany azon'ireo mpikaroka Amazon ao amin'ny pejy valin'ny fikarohana. Azonao atao ny mahita lohateny lava sy tsy misy azo tsapain-tanana ao Amazona miaraka amin'ny antsipiriany sy ny toetrany. Mino izany na tsia, ireo lohateny toy izany dia ambony kokoa noho ny Amazonia noho ireo lohateny fohy sy mazava. Eto ianao dia tokony hikaroka bebe kokoa ny fomba haneken'i Amazonia ny lohateninao noho izay mety hataon'ny mpanjifa. Azonao atao ny mameno ny lohateninao miaraka amin'ny teny fikarohana sahala amin'ny azonao, ary indrindra, tsara kokoa. Raha manao izany ianao, dia hataonao ny lohateninao ary manintona mpikirakira Amazon sy mpikaroka.
Ity fizarana ity dia manome ny mpanjifa amin'ny fampahalalana rehetra momba ny vokatra. Tokony hameno ireo fizarana rehetra ireo ianao mba hamaliana ireo fanontaniana rehetra mety hapetraky ny mpanjifa. Ankoatra izany, ilaina ny mampiditra ny teny fanalahidy misy anao ao.
Ny famaritana ny vokatra dia antsoina hoe fanitarana ny asa efa voalaza teo aloha.
Marika sy mpanamboatra
Araka ny fanadihadiana momba ny vokatra sy ny votoatin'ny fikarohana. Fitsipika, ny mpampiasa dia miezaka kokoa mikitika ny valin'ny fikaroham-bidy kokoa noho ny amin'ny tolotra tsirairay. Ankoatra izany, tadidio fa ny mpampiasa sasany dia mikaroka ny vokatra voamariky ny marika amin'ny mpamorona.
Ny fizarana dia lisitry ny lisitry ny Amazon amin'ny lisitry ny vokatra. , fiaviana, lanjany, loko, loko, daty famokarana, teknikam-pahefana, sns.
Ny sokajy sy ny sokajy
Ny valim-pikarohana Amazon dia aseho amin'ny sokajy sokajy. Izany no antony ilainao hampidirana ny vokatrao amin'ny sokajy sy sokajy misy anao. Izany dia hampiakatra ny fahafahanao hahita ny mpanjifa mety aminao ary hampitombo ny varotrao.
Amazon dia manome mpivarotra an-tserasera amin'ny faritany dimy farafaharatsiny. Mila mandray soa avy amin'ny tsirairay amin'izy ireo ianao, mahaliana anao ny teny sy ny fikarohana voalanjalanja indrindra. Na izany aza, mila manalavitra ireto hadisoana manaraka ireto ianao - mamerimberina teny, siansa, na fitenenana hafa Source .